ICafé Toui Homestay Room 3 - I-Airbnb
ICafé Toui Homestay Room 3
Igumbi elise- indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguToui
ICafé Toui Homestay ikwindawo ephakathi kwisithili esinembali saseLuang Prabang. Sisekude ngehafu ukusuka kuMlambo i-Nam Khan, kwaye ibhulorho yayo yee-bamboo yexesha elithile isesitratweni sethu. Esona sitrato sikhuselweyo sesixeko sase-Unesco sikwelinye icala lesitrato sethu. Sinamagumbi okulala ayi-6, ngalinye linebhafu yabucala kwindlu yethu eqhelekileyo yase-Luang Prabang. Zonke zinemigangatho yamaplanga emihle kunye namagumbi okuhlambela anethayile anee-shower zeglasi. Onke amagumbi azimeleyo kunye nezinto onokuzisebenzisa zehotele encinci.
Amagumbi ethu amathandathu anokuqeshiswa ngokwahlukeneyo okanye amaqela amakhulu angathatha amagumbi aliqela. Sinegumbi leendwendwe eziphantsi kathathu kunye namanye amathathu kumgangatho wokuqala. Siyindawo entle yabantu abathandanayo okanye abahambi ababini phakathi kwidolophana yase-Luang Prabang kunye nemizuzu embalwa yokuhamba ukusuka kwizinto ezenziwa kwiimarike zasebusuku kunye neevenkile zokutyela.
Onke amagumbi ethu alula kwaye ayapholisa. Amalaphu aqhelekileyo agubungela iifestile namashiti omqhaphu anxibe iibhedi. Amagumbi okuhlambela anamagumbi aliqela anethayile kwaye anee-shower zeglasi ezivalekileyo. Amagumbi okulala, anemigangatho yeplanga epolishiweyo, aneebhedi ezimbini ezilala umntu omnye okanye ibhedi enkulu enye. Igumbi ngalinye linomatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu, iTV, ifriji nomatshini wokomisa iinwele.
ICafé Toui Homestay ikwindawo ephakathi kwisithili esinembali saseLuang Prabang. Sisekude ngehafu ukusuka kuMlambo i-Nam Khan, kwaye ibhulorho yayo yee-bamboo yexesha elithile isesitratweni sethu. Esona sitrato sikhuselweyo sesixeko sase-Unesco sikwelinye icala lesitrato sethu. Sinamagumbi okulala ayi-6, ngalinye linebhafu yabucala kwindlu yethu eqhelekileyo yase-Luang Prabang. Zonke zinemigangatho yamaplanga emihle…
4.66 (iingxelo zokuhlola 59)
Isithili sembali saseLuang Prabang yindawo yasemaphandleni eyakhiwe yimilambo yethu emibini. Singesiqingatha nje sebloko ukusuka eNam Khan (umlambo omncinci) kunye nokuhambahamba okufutshane ukusuka ekupheleni kwepeninsula apho idibana khona neMekong (umlambo omkhulu). Yindawo enee-wats (iitempile), iivenkile ezincinci, kunye namakhaya asekuhlaleni. Kwakhona sisitrato nje esiyihafu ukusuka kwisitrato esiyintloko se-peninsula esikwaziyo ukufikelela ngokukhawuleza kwiivenkile zokutyela, iibhari, iindawo zokuthenga kunye nemarike yasebusuku.
Umbuki zindwendwe ngu- Toui
Umpheki uToui nomfazi wakhe, uMon, bayafumaneka ukuze bakuncede ekulungiseleleni iiteksi okanye ii-tuks, ukukusa kwii-wats okanye kwiingxangxasi, okanye ukulungiselela iiklasi zokupheka kunye nohambo lokupheka. Siqoqosha igumbi lakho suku ngalunye. Cela nantoni na oyifunayo. Siza kusoloko sizama ukunceda!
Umpheki uToui nomfazi wakhe, uMon, bayafumaneka ukuze bakuncede ekulungiseleleni iiteksi okanye ii-tuks, ukukusa kwii-wats okanye kwiingxangxasi, okanye ukulungiselela iiklasi zoku…